Tanora Iray Hafa Mpiaro Tontolo iainana Nisy Namono Tao Goatemalà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2016 17:27 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, Español, Français, عربي, Italiano, English
Sahala amin'ny toa voatsoka ny hoavin'i Goatemalà noho ny fahafatesan'i Jeremy Barrios, ilay tanora iray mpikambana amin'ny Ivontoerana ho an'ny Hetsika Sosialy, Araka ny lalàna sy Tontolo Iainana (amin'ny fiteny Espanola, CALAS) Sary nalaina tao amin'ny Pixabay. Avy amin'ny Sehatra ho an'ny daholobe.
Nampitombo be ireo ahiahy marobe momba ireo fandrahonana iaretan'ireo mpiaro tontolo iainana ary ny tsy fahavitàn'ny fanjakana miaro ireo fikambanana norahonana, ilay namonoana an'i Jeremy Barrios, 22 taona, ilay tanora mpiaro tontolo iainana tao Goatemalà.
Notifirina ary maty tao an-tanànan'i Goatemalà ny 22 novambra teo i Barrios. Amin'ny fomba maro dia endrika maizina ho an'i Goatemalà, firenena iray tafiditra ao anatin’ireo firenena folo tena mora iharan'ny fiovaovan'ny toetrandro ratsy, izay 22 ny salantaonan'ny mponina sady fara-fahakeliny mpikatroka folo mpiaro tontolo iainana – vazimba teratany no ankamaroany – no nisy namono tamin’ny taona 2015.
Niasa ho an'ny CALAS i Barrios, fikambanana iray ho an'ny hetsika sosialy, lalàna ary tontolo iainana. Hatramin'ny fahatanoràny izy no efa nanokan-tena ho an'ny rariny ara-tsosialy. Izy no mpitondratenin'ny liseam-panjakàna iray, toerana izay nitolomany mandrakariva hisian'ny fanabeazana tsara kokoa ho an'ny vahoaka.
Tsy vao voalohany amin'izao ny CALAS no lasibatry ny fandrahonana. Raha ny marina, nandritry ny taona no efa lasibatry ny fandrahonana maro ho faty ny iray amin'ireo lehiben'i Barrios sy mpikambana iray ao amin'ilay ivontoerana, Yuri Melini, ary efa in-dray mandeha voatifitra mba hampanginana azy. Yuri Melini dia fantatra ao anatiny sy ivelan'i Goatemala amin'ny maha-mpiaro zon'olombelona sy amin'ny maha-mpiaro ny zon'ireo vazimba teratany azy. Ny talen'ny CALAS, Rafael Maldonado ihany koa dia efa lasibatr'ireo fandrahonana ho faty tamin'ny alalan'ny media sosialy. Araka ny nanazavan'ny Front Line Defenders Case Study azy tamin'ny fotoana nivoahan'ireo fandrahonana :
Ny 29 Jolay 2015, tao amin'ny biraon'ny CALAS ilay mpiaro zon'olombelona no nisy olona tsy fantatra nitaingina kodiarandroa nitifitra azy im-betsaka teo ivelany. Nahazo fandrahonana ho faty ihany koa izy tamin'ny volana May 2015, nisy vehivavy tsy fantatra nanatona azy avy ao an-damosina ka niteny taminy hoe “Tsy ho ela dia hanefa ny vokatry ny asa ataonao ianao. Ho hitanao ny hitranga noho ny asa nataonao nanoherana ilay orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany, nanimba zavatra betsaka loatra ianao ka dia hovonoin'izy ireo”…
Tao anaty tatitra vao haingana, ny talen'ny Amnesty International any Americas, Erika Guevara-Rosas, dia nanazava ny hamafin'ny tolona ho an'ny tontolo iainana any amin'ny faritra Amerika Afovoany :
Asa iray isan'izay tena mampidi-doza ny fiarovana zon'olombelona any Amerika Latina, saingy ny fahasahiana miaro ireo harena voajanahary tena goavana dia mitondra ireny asa feno loza mitatao ireny ho aminà haavo iray manontolo vaovao faran'izay mety hahafaty.
Raho-mitatao ho an'ny tanora.
Fikambanana isankarazany momba ny rariny ara-tontolo iainana no efa nanondro tamin'ny rantsan-tanan'izy ireo ny fiaraha-miombon'antoka misy eo amin'ireo firenena manannkarena toa an'i Kanadà, ireo orinasa maro rantsany, ary ny fahanginana midika firaisana tsikombakomba ataon'ny governemanta izay mampiantrano fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ary ny tsy fahavitàna miaro ireo izay miady ho an'ny taniny.
Manerana ny tanibe, eo ambany horohoro mandrakariva ireo mpanentana sy mpiaro tontolo iainana. Fampitahorana, fanitsakitsahana ny zo hahazo manao fihetsiketsehana no lasa fironana iainana hatrany Kanadà ka hatrany Patagonia. Zara raha mahita ny rariny, ary io dia miteraka fiantraikany manangoly izay mazàna no tonga hatrany amin'ireo famonoana. Ao anatin'ny raharaha toa ny an'ny COPINH, fikambanana tantanan'i Bertha Caceres ao Honduras, vitan-dry zareo ny namono ireo rehetra mpitarika tao.
Goatemala dia iray amin'ireo firenena izay manao ho loha-laharana ny asa fanoherana ny fiovaovàn'ny toetrandro. Mavitrika i Goatemala amin'ny fandrisihana an'i Kanadà, sy ny Praiminisitrany, mba hihetsika manoloana ny herisetra mihanaka be atao amin'ireo mpiaro zon'olombelona manohitra ny fanimbàna tontolo iainana ataon'ireo orinasa Kanadiana, araka izay nanazavàn'ny Tambajotra Firaisankina amin'ireo vahoaka ao Goatemalà (NISGUA):
Navoaka tamin'ny 24 Oktobra 2016 ny tatitry ny Tetikasa Ny Rariny sy ny Andraikitry ny Vondron'Orinasa, ny ‘Vita avy any Kanadà’: Herisetra sy Orinasa Kanadiana Mpitrandraka Harena Ankibon'ny Tany ao Amerika Latina, ary nifantoka tamin'ireo tranganà herisetra sy heloka bevava mifandray amin'ireo orinasa Kanadiana valo amby roapolo any aminà firenena telo ambinifolo any Amerika Latina, nanomboka ny 2000 hatramin'ny 2015. Hitan'io tatitra io fa olona 44 raha kely indrindra no maty nisy namono nadritra io fotoana io, 30 tamin'izany no lasibatry ny famonoana, raha 400 mahery ireo olona naratra, tsy tafidita ao anatin'io ny ratra nateraky ny asa. Hitan'izy ireo ihany koa fa olona maherin'ny 700 no niharan'ny antsojay araka ny lalàna nadritra io vanimpotoana io, tafiditra amin'izany ireo fisamborana sy famonjàna, noho ny asa nataon'izy ireo hiarovana ny taniny, ny fivelomany, ny fahasalamany ary ny tontolo iainana.
Satria ny firenena mitolona ho amin'ny fampandraisana andraikitra momba ireo heloka bevava tany aloha sy manolo-tena mirotsaka amin'ireo dingana hanoherana ny tsimatimanota, dia efa azo andrasana ny hoe, miaraka amin'ny fanohanan'ny Fiombonambe Iraisampirenena, ho afaka hiaro ireo mpitarika sy mpiaro zon'olombelona ihany koa i Goatemalà ho tombontsoan'ny hoaviny manokana.